Yaa dilay xildhibaankii shalay lagu khaarijiyey Muqdisho? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaadday arrin la yaab ku noqotay dadka Soomaaliya, taasoo ah in dil shalay xildhibaan loogu geystay Muqdisho ay geysteen milateriga Soomaaliya.
Wasaaradda Amniga Qaranka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka ay ku lug lahaayeen dilkii shalay magaalada Muqdisho loogu geystay mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, oo lagu magacaabo Yuusuf Cabdi Dirir.
Afhayeenka wasaaradda Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa ka sheegay shir jaraa’id, in gaari ay wateen askarta oo si xowli ah ku socday, doonayeyna in uu baaso midka xildhibaannadu saarnaayeen uu rasaasta ku furay gaariga, taasoo keentay dhaawaca soo gaaray Xildhibaan Yuusuf Cabdi Dirir oo markii dambe uu u geeriyooday.
Wuxuu sheegay in goobta ka dhacday kala shaki dhexmaray ciidamada ka kala tirsan dowladda oo keentay in is-rasaaseyn.
Wasaaradda amniga, ayaa sheegtay in guddi ka kooban 10 xubnood loo saaray baaritaanka dhacdada, si ciddii ku lug laheyd sharciga loo horkeeno.
Al-Shabaab ayaa markii hore sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi. Balse Afhayeenku wuxuu beeniyey in Al-Shabaab ay ka dambeysay dilkaas.